China Working Lifejacket ho an'ny orinasa mpanamboatra fitaovam-piadiana - Fitaovam-piofanana ho an'ny orinasa mpanamboatra fitaovam-piadiana sy mpamatsy - Zhenhua Electrical
Home > Products > Toe-jomoka tsy mety levona > Miasa ho an'ny sambo mpanjono ny Lifejacket
Fitaovam-piadiana ho an'ny fitaovam-piadiana fisakafoana manokana ho an'ny mpanjono ho an'ny fanjonoana an-dranomasina sy ny asa fanjonoana an-dranomasina.
Ny fiaramanidina an-dranomasina an-dranomasina ho an'ny sambon-dranomasina, ny jirom-piaramanidina an-dranomamy any an-dranomasina dia karazana jirom-boninahitra mitovitovy amin'ny rivodoza mananotena miaraka amin'ny inflation sy ny inflation manara-penitra, ary fitaovana manokana ho an'ny fitaovam-piadiana manokana ho an'ny fanjonoana an-dranomasina sy ny fanjonoana. Ny jirom-boatin-dranomasina an-dranomasina dia manamboatra karazana vest, izay misy vatokely mainty kapok, kitapo air, blasfemia, tavoahangy dioxide karbona, sifotra, sarimihetsika mandoko, lithium batterie lampea sy ny zavatra hafa. Ny jatoky ny maripana an-dranomasina dia vita avy amin'ny lamba nendasina ny TPU tsy misy lamba ary ny kapok kapok. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny kapila mangotrakotra, ny mpangorom-borona, ny gazy karbônika karbonika, ny lithium battera, ny sifotra, ny fialamboliny ary ny fiompiana hafa, miaraka amin'ny fiakaram-be, ny lanja maivana, ny fampifanarahana matanjaka, ny fiarovan-tena azo antoka, ny fanavotana tsara.
Ny fiaramanidin'ny polisy an-dranomasina dia misy fiakarana 15,5 kg (ny kapoaky ny kapok kapok dia 7,5 kg, ary 8 kg ny tany misidina). Rehefa avy mitafy ny rano izy dia afaka mandingana ao anatin'ny 5 segondra, ary eo amin'ny 20.50 degre no misy azy, ary 12 santimetatra eo ambonin'ny rano ny rano.
Hot Tags: Working Lifejacket ho an'ny sambo mpanjono, Shina, manerantany, wholesale, tahiry, Customized, ambany vidiny, mividy fihenam-bidy, Mponina, vidin-tsolika, mora, avo lenta, orinasa, Made in China, vidin'ny